Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.4 ezughị ezu
N'agbanyeghị otú nnukwu data gị si dị ukwuu, o nwere ike ịbụ na ọ nweghị ozi ị chọrọ.
Ọtụtụ nnukwu data data adịghị ezu , n'echiche na ha enweghị ihe ọmụma ị ga-achọ maka nyocha gị. Nke a bụ otu njirimara nke data nke e kere maka ebumnuche ndị ọzọ karịa nyocha. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-elekọta mmadụ enweworị ahụmahụ nke imegide ezughị ezu, dịka nchọpụta dị ugbu a nke na-ajụghị ajụjụ ahụ dị mkpa. N'ụzọ dị mwute, nsogbu nke ezughị ezu na-eme ka ọ dịkwuo njọ na nnukwu data. Na ahụmahụ m, data buru ibu na-achọpụta ụdị ozi atọ bara uru maka nchọpụta mmadụ: ozi igwe mmadụ banyere ndị na-eso, omume na nhazi ndị ọzọ, na data iji rụọ ọrụ mmepụta ihe.
N'ime ụdị atọ nke ezughị oke, nsogbu nke data ezughị ezu iji rụọ ọrụ mmepụta ihe bụ ihe kacha sie ike idozi. Na na ahụmahụ m, ọ na-eleghara anya na mberede. N'ụzọ dị nkenke, usoro ihe ọmụma bụ echiche ndị na-adịghị ahụkebe nke ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ ma na- arụ ọrụ na-arụpụta ihe dị iche iche na-atụ aro ụzọ ụfọdụ iji weghara ọrụ ahụ na data ndị a na-ahụ anya. N'ụzọ dị mwute, usoro a dị mfe na-emekarị ka ọ bụrụ ihe siri ike. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị were ya na ị na-anwa ịnwale ọnwụnwa siri ike dịka ọ dị mfe na ndị nwere ọgụgụ isi na-enwetakwu ego. Iji nwalee nke a, ị ga-achọ ịlele "ọgụgụ isi." Ma gịnị bụ ọgụgụ isi? Gardner (2011) rụrụ ụka na e nwere ụdị ọgụgụ isi asatọ. Ndi enwere usoro ndi puru ichota ihe omuma nke ndi a? N'agbanyeghị na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-arụ ọrụ dị ukwuu, ajụjụ ndị a ka na-enweghị azịza na-enweghị isi.
N'ihi ya, ọbụlagodi na-ekwu okwu dị mfe - ndị mmadụ nwere ọgụgụ isi karịa inweta ego-nwere ike isi ike nyochaa mmetụta ike n'ihi na ọ nwere ike isi ike ịrụ ọrụ usoro ihe ọmụma na data. Ihe atụ ndị ọzọ nke usoro iwu chepụtara ndị dị mkpa ma ike operationalize agụnye "norms," "na-elekọta mmadụ isi obodo," na "ochichi onye kwuo uche." Social ọkà mmụta sayensị na-akpọ egwuregwu n'etiti usoro iwu chepụtara na data mmepụta ndaba (Cronbach and Meehl 1955) . Dị ka ndepụta ndepụta a dị mkpirikpi na-egosi, ịrụpụta ezi ihe bụ nsogbu nke ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze na-agba mgba ruo ogologo oge. Ma n'ime ahụmahụ m, nsogbu nke ịrụ ọrụ nkwado dị ọbụna karịa mgbe ị na-arụ ọrụ na data ndị e mepụtara maka nzube nke nnyocha (Lazer 2015) .
Mgbe ị na-enyocha ihe nchoputa, otu ụzọ dị irè na nke bara uru iji chọpụta ezigbo nkwado bụ iji nweta nsonaazụ, nke a na-egosipụtakarị na nhazi, ma gosipụtaghachi ya na usoro nke data eji. Dịka ọmụmaatụ, tụlee ọmụmụ ihe abụọ na-ekwu na ha na-egosi na ndị nwere ọgụgụ isi na-enwetakwu ego. N'ọmụmụ ihe mbụ ahụ, onye nchọpụta ahụ chọpụtara na ndị na-ahụ nke ọma n'ule Raven Progressive Matrices-nwalere nke ọma nke nyocha nke ọgụgụ isi (Carpenter, Just, and Shell 1990) -nwekwu ego dị elu maka ụtụ isi ha. N'ọmụmụ nke abụọ, onye nyocha ahụ chọpụtara na ndị mmadụ nọ na Twitter ndị ji okwu ogologo oge yikarịrị ka ha ga-ekwu banyere ụdị ọnụahịa. N'okwu abụọ ahụ, ndị nchọpụta a nwere ike ikwu na ha egosiwo na ndị nwere ọgụgụ isi na-enweta ego. Otú ọ dị, n'ọmụmụ ihe mbụ, data ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, ma na nke abụọ ha abụghị. Ọzọkwa, dị ka ihe atụ a na-egosi, data ndị ọzọ adịghị edozi nsogbu na-eme ka ha rụọ ọrụ. I kwesiri inwe obi abua banyere ihe omumu nke uzo nke abuo ma o bu nde tweet, otu ojeri tweets, ma o bu tillion. N'ihi na ndị na-eme nchọpụta amaghị na echiche nke ịrụpụta ezigbo ihe, tebụl 2.2 na-enye ụfọdụ ihe atụ nke ọmụmụ ndị na-arụ ọrụ usoro ihe eji eme ihe site na iji data nyocha.
Isiokwu nke 2.2: Ihe Nlereanya nke Ọdịdị Ahịa nke Ejiri Iji Arụ Ọrụ Nzuzo
Ndebanye aha Email site na mahadum (meta-data naanị) Mmekọrịta mmekọrịta Kossinets and Watts (2006) , Kossinets and Watts (2009) , De Choudhury et al. (2010)
Mgbasa ozi mgbasa ozi na Weibo Njikọ aka na mba Zhang (2016)
Ndekọ Email site na njikwa (meta-data na ederede zuru ezu) Egwuregwu kwesịrị ekwesị na nzukọ Srivastava et al. (2017)
Ọ bụ ezie na nsogbu nke data ezughị ezu maka ịmepụta usoro ihe ọmụma dị ezigbo mma iji dozie, e nwere ihe ngwọta dị iche iche na ụdị ezughị ezu ndị ọzọ: ezughị ezu ozi igwe mmadụ na ezughị ezu ozi banyere omume na nhazi ndị ọzọ. Ihe ngwọta mbụ bụ ịnakọta data ị chọrọ; Aga m agwa gị banyere nke ahụ n'isi nke atọ mgbe m gwara gị banyere nyocha. Nke abụọ isi ngwọta bụ na-eme ihe data ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ ọrụ na onye-àgwà inference na-elekọta mmadụ ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ imputation. N'ụzọ dị otú a, ndị na-eme nchọpụta na-eji ozi ha nwere na ụfọdụ ndị nwere àgwà ndị ọzọ nke ndị ọzọ. Ihe ngwọta nke atọ nwere ike ijikọta isi mmalite data. A na-akpọ usoro a mgbe ụfọdụ na njikọ ndekọ . Ihe ederede kachasị amasị m maka usoro a bụ Dunn (1946) na paragraf nke mbụ nke edemede mbụ e dere na njikọ nchịkọta:
"Onye ọ bụla nọ n'ụwa na-ekepụta Akwụkwọ nke Ndụ. Akwụkwọ a na-amalite site na ịmụ nwa ma na-ejedebe na ọnwụ. Akwukwo ya bu ihe ndekọ nke ihe ndi mere eme na ndu. Ndekọ ndekọ bụ aha e nyere usoro nke ikpokọta peeji nke akwụkwọ a. "
Mgbe Dunn dere ebe ahụ ọ na-eche na Akwụkwọ nke Ndụ nwere ike ịgụnye ihe ndị dị mkpa dị ka ọmụmụ, alụmdi na nwunye, ịgba alụkwaghịm, na ọnwụ. Otú ọ dị, ugbu a edere ọtụtụ ihe ọmụma banyere ndị mmadụ, Akwụkwọ nke Ndụ nwere ike ịbụ nkọwa zuru ezu zuru ezu, ma ọ bụrụ na ibe dị iche iche (ya bụ, dijitalụ dijitalụ) nwere ike ijikọ ọnụ. Akwụkwọ nke Ndụ a nwere ike ịbụ nnukwu akụ maka ndị nchọpụta. Ma, a pụkwara ịkpọ ya nchekwa data nke mbibi (Ohm 2010) , nke a ga-eji mee ihe maka enweghị nzube, dịka m ga-akọwa na isi nke isii (Ụkpụrụ).